पालुङटार ७ वडा कार्यालयको कम्पाउण्ड भत्काइयो । – Gorkha Sansar
in अर्थतन्त्र, मुख्य समाचार, हेडलार्इन
पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं. ७ मा बाटो विस्तारका कार्य धमाधम अघि बढिरहेको छ । नगरपालिकाको योजनाअनुसार वडाभित्रका मोटरबाटोहरुको मापदण्ड तयार गरी विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । सडकका नयाँ ट्रयाक खोल्नुभन्दा भएका सडकहरुलाई व्यवस्थित र चौडा पार्नुपर्ने पालुङटार नगरपालिकाका नगर प्रमुख ई. दिपकबाबु कंडेल बताउनुहुन्छ । मुख्य सडकहरु विस्तार तथा स्तरोेन्नतीका क्रममा सवैले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकाँस सडकहरु १० मिटर तथा ८ मिटरको मापदण्ड तोकी साँघुरा सडकहरुलाई फराकिलो गर्ने क्रममा आहालेबर देखि बिरुवाटार खण्डमा विस्तार गर्दै बिरुवाटार आइपुगेको छ । यसै क्रममा बिरुवाटारमा वडा कार्यालय भवनको कम्पाउण्ड समेत भत्काई काम अघि बढाएकको वडाध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बिरुवाटारका घरहरु भत्काउनको लागी वडाले सूचना गरिसकेको र निर्धारित समयमा नभत्काएमा नगरपालिकाको सहयोगमा भत्काई छिटै काम अघि बढाइने बताइएको छ ।